बुद्ध एयरका यात्रुप्रति क्षमाप्रार्थी छु : मन्त्री भट्टराई
काठमाडौं, २९ भदौ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बुद्ध एयरका यात्रुप्रति क्षमा मागेका छन् ।
मन्त्री भट्टराईले नेपालगञ्ज विमानस्थलमा आफ्नो कारणले यात्रुहरुमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमाप्राथी रहेको बताएका हुन् । उक्त घटना लगत्तै उनले फेसबुकमार्फत् यात्रुसँग क्षमा मागेका हुन् । ‘मेरा कारणले यात्रुहरुमा पर्न गएको असुविधाप्रति क्षेमाप्रार्थी छु’, भट्टराईले आफ्नो फेसबुक स्टेटसमा लेखेका छन् ।
त्यस्तै मन्त्री भट्टराईले आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठमा सहभागी हुनै पर्ने बाध्यताका कारण आफू काठमाडौं आउनु परेकोले उडानमा ढिलाई भएको समेत बताएका छन् । सो क्रममा केही व्यक्तिहरु नेपालगञ्ज विमानस्थलमा आफूप्रति आक्रामण शैलीमा प्रस्तुत भएको समेत उनको भनाई छ ।
‘भोली प्रतिनिधिसभामा माननीयहरुको प्रश्नको मैले जबाफ दिने कार्यक्रम रहेको कारण काठमान्डौ फर्कनै पर्ने दबाबमा म थिए, नेपालगंज विमानस्थलमा ३/ ४ जना व्यक्तिहरु आक्रमक शैलीमा मेराविरुद्ध प्रस्तुत हुनुभयो’, उनले आफ्नो फेसबुक स्टेटसमा लेखेका छन्, ‘ एकजनाले पारसका विरुद्ध सातलाख हस्ताक्षर दरबारमा बुझाएर तैँले हामीलाई कति दु:ख दिएको छस् ? त्यो हामीले कहाँ बिर्सेका छौ र ? सम्म भने ।’
यस्तो छ मन्त्री भट्टराईको फेसबुक स्टेटस :
शनिबार राति नेपालगञ्ज विमानस्थमा विमान एक घण्टा होल्ड गराएको भन्दै मन्त्री भट्टराईप्रति केही यात्रुहरु आक्रोशित बनेका थिए । सोही क्रममा निर्धारित समयभन्दा ढिलो आएको र आम नागरिकको समयलाई बेवास्ता गरेको भन्दै मन्त्री भट्टराईलाई दुर्व्यवहार गर्ने प्रयास समेत भएको थियो ।
क्यान्सर अस्पतालमा बिरामी र कुरुवाको बिजोग
म्यानमारमा रहेका २५ नेपाली लिएर जहाज काठमाण्डौं आइपुग्यो
आजदेखि विदेशमा अलपत्र नागरिक ल्याइँदै
जुम्लाको क्वारेन्टीनमा रहेका ६५ वर्षीय पुरुषको मृत्यु
देशको अधिकांश स्थानमा शनिबारसम्म वर्षा हुने
नेपालले बनाएको कोरोनाको खोपप्रति डब्ल्युएचओको चासो